Somaliland Fursadaha ay haysato doorkeeda ma ka ciyaari karta isbedeladda ka socda Bariga Afrika? | ToggaHerer
← Daawo: ” Khilaafkan Saami Qaybsiga Wakiiladu waxa uu soo Taxnaa ilaa iyo Cigaal Waaan Khilaaf kolba La suurinaayo Ilaa hadeerna taagan ” Xildhibaan Balaaki Oo Ka hadlay Saami Qabsiga golaha wakiilada
Doorka Haweenka & duruufaha ku xeeran (Qeybta 1aad) →
Somaliland Fursadaha ay haysato doorkeeda ma ka ciyaari karta isbedeladda ka socda Bariga Afrika?
Published on August 3, 2018 by Magan
Somaliland waxay haysataa fursado badan oo ay kaga faa’iidaysan karto isbedelka ka socda geeska Afrika, inkasto ay hadda u muuqato inay daawade ka tahay oo ay sugayso halka ay ku dambayso isbeladdan socdaa.
Itoobiya waxa hogaanka qabsaday siyaasiyiin da’yar oo wax weyn ku soo kordhiyey bariga Afrika oo furfuray siyaasaddii, iyadoo ay heshiiyeen dalal muddo badan col ahaa, nasiib daro wali Somaliland lama kulmin Ra’isal wasaaraha Cusub Abiy Ahmed, wuxuuna u muuqda mid yaraysanaya awoodda Somaliland iyo jiritaankeeda.
1. Qoomiyadda Oromadu waxay ku xidhan tahay Dekada Berbera iyo suuqa Wajaale, haddii dekadda si dhakhso ah loo balaadhiyo waxay quudin karta bariga Itoobiya oo dhan, gaar ahaan Oromadda iyo Soomaalida oo dhulka u badan Itoobiya degan, halka Dekadda Eritrea qoomiyadaha kale ee u dhow dhow quudinayso .
2. Dawlad deegaanka Soomaalidda Itoobiya isbedel baa ka socda, waxaana la doonayaa in xisbiyo laga hirgaliyo, hadii Somaliland door ku yeelato oo siyaasiyiinta qaar dhabarka soo taabato oo xisbiyo u furto oo danno badan tusto, isla markaana ay awoodda saarto sidii xisbiyadaaasi ay wadato usoo bixi lahaayeen, taas miyeyna Itoobiya dhexdeedda saamayn ku yeelanayn Somaliland.
3. Sidoo kale, waxa fursad kale u ah Somaliland saaxiibtinimada Imaaraadka oo door weyn ku leh siyaasadda geeska, isla markaana Saaxiib la leh Somaliland iyo Itoobiya, waxay Somaliland u adeegsan karta danaheeda iyo inay xidhiidhkooda fiicneeyo.
Su’aashu waxay tahay Somaliland diyaar ma u tahay inay siyaasadaha iyo isbedelka socda la jaanqaado, mise waxay sugaysa intay kala miirmayso oo lagu kala hagaagayo, soomaalidu waxay ku maahmaahda “Gees Lo’aad kulaylka lagu gooyaa, inta hawluhu cusub yihiin hadii aanad geesta ka raacin ogow siyaasadaadu kuma sugays barteedana ma taagnaanayso.